जनताको मन जित्ने काम गर्न सरकारलाई नेता नेपालको सुझाव | Matrisandesh
जनताको मन जित्ने काम गर्न सरकारलाई नेता नेपालको सुझाव
काठमाडौं । सत्तारुढ दलका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले अहंकार छोडी जनताको मन जित्ने काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
युवा संघ नेपालको २९ औ बार्षिकोत्सवको अवसरमा बुधबार राजधानीमा आयोजित विशेष कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले अहंकारी दृष्टिकोण, गलत चिन्तन र सर्वश्रेष्ठताको भ्रमले पतनतर्फ डोर्याउने भन्दै कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई बचाई लोकप्रिय बनाउनेतर्फ गम्भीर बन्न सुझाव दिएका हुन् । उनले बहुमतको अहंकारमा नपर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए ।
उनले भने, ‘हाम्रो काम र व्यवहारले नै जनताको मन जित्न सक्दछ । जनताका पीर, मर्कामा सहयोगी भयौ भने जनताको दुःख कष्टमा साथ दियौ भने अनि जनताको सुखमा पनि रमायौ भने अनि जनताले हामीलाई मन पराउनेछन् । नभए त्यतिकै जनताले मन पराउँछन् भनेर त्यसको ग्यारेण्टी गरेर बस्न सक्दैनौ । ख्याल गर्नुहोस् । ख्याल गर्नुहोस् । यसअर्थमा पनि जनताका समस्याहरु के हुन् ? जनताका चाहानाहरु के हुन् ? जनता के भनिरहेका छन् ? त्यो सुन्नुहोस् । म जोड दिन चाहन्छु । हाम्रो बानी के भएको छ भने भन्ने बोल्ने । सुन्ने कम ।
रक्षाबन्धन एवं जनैपूर्णि पर्व मनाइयो